Ababalisi bezindaba abahle kakhulu emlandweni: bangobani? | Izincwadi Zamanje
U-Alberto Legs | | Abalobi, Izindaba
La imibhalo emifushane Ithole ukuvuselelwa eminyakeni yamuva nje ngenxa yemithombo yezokuxhumana namaphethini wokusetshenziswa ashesha kakhulu kunangaphambilini. Isikhathi esihle sokuzikhumbula lezo ababalisi abaphambili kunabo bonke ophethe ukudumisa uhlobo oluthile, kuze kube maphakathi nekhulu lama-XNUMX, owayephila iminyaka yalo ethile yegolide.
3 U-Alice munro
4 U-Anton Chejov
Wazalelwa eBoston ngo-1809, uPoe wayeyi- inxusa eliyinhloko lendaba emfushane e-United States nomanduleli wohlobo oluthile olunjengokwesayensi eqanjiwe lokho kuzovula umnyango kwabanye ababhali kusukela ngekhulu le-XNUMX kuqhubeke. Futhi kubhekwe ukuthi umbhali wokuqala azame ukuziphilisa ngezindaba zakhe, umbhali weThe Golden Beetle wayeyisigqila sempilo esimakwe ubunzima bomndeni, utshwala nokudangala. Okuhlangenwe nakho okuvela kuzo okwakudala kwezincwadi ezimfushane ezazigubuzela ezobu-satirical namaGothic njengoLa caja oblonga, u-El Rey Peste noma, umsebenzi wakhe omkhulu, Ayikho imikhiqizo etholakele..
Noma ngabe bekuyiyo Iminyaka eyikhulu yedwa inoveli ezomenza abe yisihlabani semibhalo ayiyona namuhla, uGabo wahlakulela ubuciko bendaba emfushane kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe. Kusuka eqoqweni Amehlo enja eluhlaza okwesibhakabhakalokho bekuvele kulindele iMacondo esizoyithola ngesaga laseBuendía kubuntatheli Indaba yokulahlwa, umbhali waseColombia usinikeze izindaba eziningana okufanele zikhulunywe ngazo, phakathi kwazo ezinamandla iThe Trace of Your Blood in the Snow, ezifakwe kuleli qoqo Amashumi amabili nambili amaPilgrim Tales eyayikhuluma ngokuhlangenwe nakho kwezinhlamvu ezahlukene zesiLatini eYurophu futhi eyanyatheliswa ngo-1992.
U-Alice Munro, owine iNobel Prize in Literature yango-2013.
Umklomelo weNobel ngo-2013 ngomsebenzi wakhe onzima endabeni emfushane, waseCanada u-Alice Munro ungomunye we izibonelo ezinhle kakhulu zesikhathi esifushane semibhalo emifushane. Yize imibhalo yakhe yokuqala ifike kuma-60s, kuze kwaba seminyakeni yama-70s lapho ezoqala ukwaziwa khona ngenxa yeqoqo Gibela isthuthuthu?, kwalandelwa impumelelo yezinye izingqikithi ezifana nezidumile Izinyanga zikaJupiter. Izindaba zikaMunro zivame ukusethwa eHuron County, e-Ontario, futhi ngokungafani nabalingisi besilisa abathandekayo, abalingiswa besifazane bayinkimbinkimbi kakhulu, bahilela umfundi ngezindaba zabo zesizungu, ukubuyisana, kanye nokuzazisa.
Uma kukhona umxoxi wezindaba okufanele acatshangelwe, lowo ngumRashiya U-Anton Chejov, umbhali waphenduka waba yi-kaleidoscope enamandla yaseRussia yangakubo, izwe iqiniso lakhe alithatha ngezindaba ezaveza ubuqiniso nobunjalo bemvelo ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Yize ekuqaleni uChekhov aqala ukubhala nje ngenxa yezifiso zezezimali, wagcina ngokufaka ama-vanguards amasha afana ne-monologue yangaphakathi, okwakugqugquzela abanye ababhali abanjengoJames Joyce ngemuva kokuphumelela komsebenzi wakhe owawuhunyushwe ngemuva nje kwempi yokuqala yomhlaba. Isebenza njenge-Flying Islands, Ukuqabula Ukudabuka sekuvele kuyingxenye yomlando wezincwadi emhlabeni jikelele.
Yize ekuqaleni umsebenzi wakhe wawususelwa ekudumiseni uLouis the Great, enkantolo kabani ayisebenzele ingxenye yekhulu leshumi nesikhombisa, uPerrault wayemiselwe ukuvuselela izinganekwane zesikhathi sokuphila ukuze azilethe ezizukulwaneni ezintsha futhi azenze zihlale phakade. Umdali wezindaba zezingane (noma mhlawumbe hhayi kangako) njenge ICinderella, iLittle Red Riding Hood noma iPuss emaBhuthini, kufakwe encwadini Ayikho imikhiqizo etholakele., UPerrault kungenzeka ukuthi ungomunye wababalisi bezindaba abadume kakhulu emlandweni futhi umbhali okuvela kuye indawo yonke yezingane yokuziphatha, ukuqiniswa noma amafilimu eDisney.
Wazalelwa eJalimane kepha waba yisizwe e-United States, uBukowski umele isithombe esiyinsumansumane sombhali okhohlakele: utshwala, ukubhuqa nobulili ezungeze umshini wokubhala ongaziphilisa ngawo (noma ozoqhubeka nokuthola izinzuzo zokuphila ngokungalingani). Yize amanoveli akhe eyingxenye yomsebenzi wakhe, yizindaba ezimfushane ezamenza waduma futhi zakhuthaza isizukulwane sonke sababhali esasithandwa nguye. ubuqiniso obungcolile. Izibonelo ezinhle kakhulu Umshini Wokuncinza, i-anthology ehlanganisa izindaba ezahlukahlukene ngabalingiswa nezimo empilweni yombhali yansuku zonke, noma indaba ethi Wanted Woman, lapho uBukowski akhuluma ngothando olungenakwenzeka ezweni elinobutha.
Ifilosofi yaluka umsebenzi walowo obhekwa njenge ababhali abahamba phambili bekhulu lama-XNUMX. Kusukela lapho lapho umkhathi wama-Borges ase-Argentina waveza ukuthola amafomu asobala kepha futhi afuna amafomu. I-literary mathematics noma i-bestiaries bestiaries, ukufanekiselwa kweBhayibheli, uShakespeare noma iCabala, kuqinise umzila walokhu ozongenela ukhetho lukaNobel Prize in Literature Incazelo yayo yakho konke futhi ingasebenzisi lutho ngezinhlamvu noma izindaba ezifana nenganekwane I-Aleph kwenze kube yisilinganiso.
Isakhamuzi saseBorges, uCortázar akakude emuva uma kukhulunywa ngomsebenzi wakhe wokuxoxa izindaba. Yize ingxenye yefa lakhe igxile encwadini yakhe edumile Rayuela, UCortázar wakhazimulisa umhlaba ngezindaba lapho ukuguquguquka kwemvelo nokuntanta kwansuku zonke kubambene, ikakhulukazi ezindabeni ezinjengeLa noche bocarriba, okungenzeka enye yazo izindaba ezihamba phambili, noma i-Axolotl, lapho intulo yaseMexico isebenza njengephethini yokukhuluma ngesizungu somuntu.
Uzakwethu womunye umbhali wezindaba ezimfushane waseMexico onjengoJuan Rulfo, umbhali engisungule naye izincwadi zemibhalo ezifana nomagazini iPan, u-Arreola ungomunye ababalisi abakhulu bekhulu lama-XNUMX futhi wayengomunye wabamemezeli abaphumelela kakhulu eMexico. Umsebenzi wakhe odume kakhulu, Uzungu, iqoqo lezindaba ezikhuluma, ngokuhlekisayo, izinkinga ezifana nesizungu, ukuzihlukanisa noma izinkinga zothando. Ngaphandle kokungabaza, enye ye- ababhali abaningi baseMexico.
Lezi ababalisi abaphambili kunabo bonke Baqinisa ukulandisa okufushane kepha okujulile, baba ngababhali abakhulu besikhathi sabo futhi bathonya izizukulwane ezizayo eziphendulele isikhashana saba mkhuba omusha.
Yimuphi umxoxi wezindaba omthandayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izindaba » Ababalisi bezindaba abahamba phambili emlandweni
UWalter gonzales kusho
Umxoxi wezindaba ohamba phambili ePeru kwakunguSebastián Salazar Bondi
Phendula uWalter Gonzales
Yini okusha okuvela kuJo Nesbø. Ekwindla Indlalifa futhi ... izobuya uHarry Hole